ओमिक्रोनका लागि नेपाल-भारत सीमा नाका बन्द गर्नु व्यावहारिक छैनः डा. पुन « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १५ मंसिर । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबारे निगरानी राख्नुपर्ने भए पनि नेपाल-भारत सीमा नाका बन्द गर्नु व्यावहारिक नहुने बताएका छन् ।
म्युटेसन हुँदैमा ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा खराब नै हो भन्ने आधार नभएको उनले बताए । उनले थपे, “दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाभाइरसको नयाँ म्युटेन्ट छिटो फैलिएपछि नोभेम्बर २६ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसबारे जानकारी दिएको छ । यो अघिल्ला भाइरसका भेरियन्टभन्दा जेनेटिक कोडमा परिवर्तन भएको हो । यसको स्पाइक प्रोटिन अत्यधिक मात्रामा छिटो फैलिने र संक्रामक हुने प्रारम्भिक नतिजा आएकाले विश्व तरंगित भएको छ । विभिन्न देशले निगरानी बढाएका छन् । तर नेपालमा यो भित्रिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । नेपालमा बेलायतको अल्फा भेरियन्ट र भारतको डेल्टा भेरियन्ट देखिएका थिए । डेल्टा भेरियन्ट अत्यन्त उग्र भएकाले नेपालगन्ज र काठमाडौं ठूलो मानवीय क्षति भएको हामीले बिर्सेका छैनौं ।”